Sports News Archives - Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
Naing Linn .3hours ago
Naing Linn .5hours ago
Gareth Bale ကို ရီးယဲလ်အသင်း တကယ်ပဲရောင်းသင့်နေပြီလား
(၉၅)နှစ်အတွင်း အက်သလက်တီကိုအသင်းရဲ့ ပထမဆုံး အင်္ဂလိပ်ကစားသမားဖြစ်လာသူ Trippier
ဂြိုလ်သားတွေ့နိုင်ခြေက အာဆင်နယ်ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်ခြေထက် (၁၀)ဆပိုများနေပြီ
ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေထဲမှာ ငွေသုံးကြမ်းနေတဲ့ အက်စတွန်ဗီလာ
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ တူရင်ကို ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Matthijs de Ligt
လက်ရှိကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအသင်းစာရင်းမှာ အဆင့်(၃၄)သာ ရခဲ့တဲ့ မန်ယူ
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို ရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်တဲ့ Matthijs de Ligt
by Ko Kyue .3days ago
Icardi ၊ Lukaku နဲ့ အင်တာမီလန်တို့ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဇာတ်လမ်း
၀င်ဘယ်လ်ဒန်ဗိုလ်လုပွဲသမိုင်းမှာ အချိန်အကြာဆုံးပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီး ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ Djokovic
နောက်ခံလူ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ Maguire ကို ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့ မန်ယူ
အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းရဲ့အားအထားရဆုံး HRM Solution
အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းတိုင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အလိုအပ်ဆုံးတွန်းအားတစ်ခုကဘာလဲလို့ မေးရင် စနစ်တကျနဲ့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် (Human Resource) လို့ပြောရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ အဲဒါဆိုရင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဟာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ဘယ်လိုအရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါသလဲ။ အတူတူသုံးသပ်ကြည့်ရအောင်ပါ။
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အတွက် အဓိကအရေးအပါဆုံးကတော့ ဝန်ထမ်းပါ။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းပြီး Profile တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးထားမယ်၊ မတူညီတဲ့ ရာထူးနေရာနဲ့ ဝန်ထမ်းအမျိုးမျိုး အလုပ်ချိန်အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်တဲ့အတွက် ဒါတွေကိုလည်း သေချာစီမံဖို့လိုမယ်၊ မတူကွဲပြားတဲ့ လစာတွေရှိမယ်၊ ပြိုင်ဘက်တွေများလာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းကို အအောင်မြင်ဆုံးထိုးဖောက်ချင်ရင်တော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ခန့်ထားနိုင်ဖို့လိုမယ်၊ မိမိခန့်အပ်ထားတဲ့ ဝန်ထမ်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု ကောင်း မကောင်း၊ တိုးတက်မှုရှိမရှိ ဒါတွေကိုလည်း အစဉ်တစိုက် စောင့်ကြည့်လေ့လာနေဖို့လိုမယ်။ ဝန်ထမ်းရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ အစဉ်တိုးတက်နေဖို့နဲ့ အစဉ်ပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ပညာတွေအဆက်မပြတ် သင်ယူလေ့လာနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ Training Program တွေထားရှိပေးဖို့ လိုပါမယ်။ ဘယ်ဌာနရဲ့ ဝန်ထမ်းကိုတော့ ဘယ်လို Training မျိုးပေးဖို့ လိုအပ်နေပြီလဲဆိုတာ HR အနေနဲ့သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ အရည်အချင်းရှိပြီးသား ဝန်ထမ်းတွေလည်း ပိုမို ထူးချွန်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ ယူနီဖောင်း၊ ကွန်ပျူတာ အစရှိတဲ့ အထွေထွေအသုံးစရိတ်တွေအပြင် တော်တဲ့ဝန်ထမ်းကို ဆုချဖို့ စည်းကမ်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ ဝန်ထမ်းကို ဒဏ်ပေးဖို့ အစရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအပေါ် အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကအစ ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါမယ်။ ဒါမှသာ ဝန်ထမ်းအပြောင်းအရွှေ့ ကြောင့် လုပ်ငန်းအပေါ်ထိခိုက်နစ်နာတဲ့ ပြဿနာတွေကနေ ကင်းဝေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အလုပ်ဝင်ပြီးတော့ အခန့်မသင့်လို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အလုပ်ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်း HR အနေနဲ့ စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့လိုတာပါပဲ။ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အလုပ်ထွက်သွားတဲ့အခါ သူ့နေရာမှာ ဝင်လုပ်မယ့် နောက်ထပ်ဝန်ထမ်းအသစ်ကို အလုပ်တွေစနစ်တကျ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ ဝန်ထမ်းအပြောင်းအရွှေ့ကြောင့် ကုမ္ပဏီရဲ့ အလုပ်ဇယားတွေ နှောင့်နှေးသွားခြင်းမရှိဘဲ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီဝန်ထမ်းက ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်ထွက်သွားတာလား၊ ပြဿနာတွေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးရှာပြီး ထွက်သွားတာလားဆိုတဲ့ ဒီဝန်ထမ်းရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကိုလည်း သေချာမှတ်သားထားမှ နောင်တစ်ချိန်မှာ မှားယွင်းပြီး ပြန်လည်ခန့်အပ်တာမျိုးကို ရှောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
HR ရဲ့ တာဝန်က ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ဖြစ်ချိန်ကစလို့ အလုပ်ထွက်ချိန်ထိပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခုကျန်ပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ ဝန်ထမ်းမဖြစ်ခင် အလုပ်ခေါ်တဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ခေါ်ယူတဲ့အခါ လျှောက်လွှာရှင်အများကြီးထဲကမှ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ လူတွေကို စာရင်းစစ်ထုတ်ထားရမယ်။ ပထမအင်တာဗျူးမှာ အင်တာဗျူးသူက အလုပ်လာလျှောက်သူကို အမှတ်ပေးထားတာတွေကို သိမ်းဆည်းမှတ်သားထားပြီးတော့ ဒုတိယအင်တာဗျူးမှာ လူစာရင်းကို အလွယ်တကူစစ်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ HR ရဲ့ အလုပ်ဟာ စနစ်တကျနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အနေနဲ့ များမြောင်လှတဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ကိစ္စအဝဝကို စီမံခန့်ခွဲပေးရတဲ့အတွက် အချိန်အားရော၊ လူအားပါ သုံးဖို့လိုပါတယ်။ လူအားကိုသုံးပြီး စီမံခန့်ခွဲတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတာ၊ မေ့လျော့တာ၊ စာရင်းဇယားမှားတာ အစရှိသဖြင့် လူလုပ်တဲ့အမှားတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယနေ့ခေတ်မှာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ငန်းအတော်များများ အားကိုးအားထားပြုလာကြတဲ့ နည်းပညာဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ HR ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းပိုင်းတွေကို ကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ Cadena HRM Solution ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Cadena HRM Solution ဟာ ဒတ်ခ်ျမှာ အစပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိမှာတော့ အရှေ့တောင်အာရှတစ်ခွင်က လုပ်ငန်းအသီးသီးမှာ ကျယ်ပြန့်စွာသုံးစွဲလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ Web-based ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Application ထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ အင်တာနက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ဘယ်နေရာကနေမဆို မိမိရဲ့ Web Browser ထဲကနေ ဝင်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Cloud Ready ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အချက်အလက်မှန်သမျှကို Cloud ထဲ သိမ်းထားနိုင်ပြီး လိုအပ်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာ ပြန်လည်ရယူအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အစရှိတဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ လုပ်ငန်းအသီးသီးမှာ အသုံးပြုရအဆင်ပြေတဲ့အတွက် ဒီ Cadena HRM Solution ဟာ လုပ်ငန်းမရွေးအဆင်ပြေမယ့် အဖြေတစ်ခုလို့ပဲဆိုပါရစေ။ ဒါကြောင့် သင့်လုပ်ငန်းကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် တိုးတက်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ယုံကြည်အားထားရတဲ့ HR Solution ဖြစ်တဲ့ Cadena HRM Solution ကို စိတ်ပါဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ Vanguard Myanmar က မိတ်ဆွေတို့အတွက် အသင့်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရစေ။
Cadena HRM Solution နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေပိုပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Vanguard Myanmar ရဲ့ Website www.vanguardmm.com မှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်သလို Email contact@vanguardmm.com ကိုလည်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
1 Juventus 37 61 92
2 Napoli 37 47 88
3 Roma 37 32 74
4 Lazio 37 41 72
5 Inter Milan 37 35 69
6 AC Milan 37 10 61
7 Atalanta 37 19 60
8 Fiorentina 37 12 57
9 Sampdoria 37 -2 54
10 Torino 37751
11 Sassuolo 37 -29 43
12 Genoa 37 -9 41
13 Bologna 37 -11 39
14 Chievo 37 -24 37
15 Udinese 37 -16 37
16 Cagliari 37 -29 36
17 SPAL 37 -22 35
18 Crotone 37 -25 35
19 Hellas Verona 37 -47 25
20 Benevento 37 -50 21
1 PSG 37	 79 92
3 Lyon 37 43 75
4 Marseille 37 32 74
5 Rennes 37 6	 57
6 Nice 37 2	 54
7 Bordeaux 37 1 52
9 Montpellier 37350
37 -4 45
13 Dijon 37 -19 45
14 Angers SCO 37 -9 41
37 -22	 38
20 Metz 37	 -38 26
1 Wolves 46 43	 99
4 Aston Villa 46	 30 83
6	 Derby 46	 22	 75
7 Preston 46	 11 73
8	 Millwall 46 11	 72
9	 Brentford 46 10	 69
10 Sheff Utd 46	 7	 69
11	 Bristol City 46 9	 67
13	 Leeds 46 -5	 60
15 Sheff Wed 46	 -1	 57
17 Nottm Forest 46 -14	 53
18 Hull 46 0	 49
23 Burton 46 -43	 41
မိုဟာမက်ခရာကီ (Mohammad Karaki) ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ